क्रेडिट जोखिम के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki क्रेडिट जोखिम
क्रेडिट खरिद के हो?
तपाईं शब्द प्राप्त गर्नुहुनेछ क्रेडिट जोखिम पहिले नै सोच्न के यो सबै बारेमा छ। ठीक विशेष निर्दिष्ट शब्द, ऋण र ऋण को ऋण मा बैंक को जोखिम को रूप मा क्रेडिट जोखिम को परिभाषित गर्दछ। विशेष गरी, यो परिभाषा मोचन दर र तिनीहरूको अनुपस्थितिमा ऋणको पूर्वनिर्धारित जोखिमको उद्देश्य हो। ब्याज र amortization क्रेडिट जोखिम द्वारा समान रूप देखि प्रभावित हुन्छन्, र बैंकों को ब्याज दर प्रसाद सामान्यतया यहाँ संबोधित गरिन्छ। बैंकिंग मा क्रेडिट जोखिम को अवधारणा को बराबर एक ऋण मा पुनर्मूल्यांकन को अवधारणा हो। जमानतको रूपमा, सम्पत्तिको एक वस्तु यहाँ प्रयोग को पुनर्मूल्यांकन प्राप्त गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ। क्रेडिट जोखिम बैंकबाट जारी गर्नु अघि उधारकर्ताको सर्तको श्रेय नजिकको सम्बन्ध छ र जोखिम निर्धारण हुन्छ।
क्रेडिट जोखिम र चरणहरुमा विभाजन
एक शब्द को रूप मा जोखिम तपाईं को बारे मा अवगत हुनेछ, एक दुर्घटना को जोखिम, असफलता को जोखिम र सम्झौताको विफलता सम्मानित छैन। यसैले सधैं क्रेडिट डिफल्टको बारेमा क्रेडिट क्रेडिट उल्लेख गर्दा उल्लेख गरिन्छ। बैंकले तपाईको सङ्कलन र लेखामा समावेश गर्नुपर्दछ कि सबैभन्दा खराब मामलामा, ऋणको चुकौती हुन सक्छ। ग्राहकको चरण-दर-चरण परीक्षण यहाँ गरिन्छ। क्रेडिट ब्यारेन्स सम्भावित जोखिम घटनाहरु र सम्बन्धित पूर्व क्रेडिट व्यवहारको रेकर्डमा जानकारी प्रदान गर्दछ। यदि, उदाहरणका लागि, तपाईले सधै सबै समय समयमा बिल भुक्तानी गर्नुभयो, त्यहाँ भान्सामा नकारात्मक प्रविष्टिहरू छन् वा अतीतमा ऋणको कुल हानि पनि भयो। बैंक, वा, बरु, बैंकहरू यहाँ दृढ रूपमा सञ्जाल छन् र उनीहरूले यो डेटा प्रयोग गर्छन् ताकि तपाईं ग्राहकको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण विभिन्न चरणहरूमा विभाजित गरिएको छ। यसकारण त्यहाँ सधैँ एउटा खास जोखिम हो जुन ऋण असफल हुन सक्छ। यहाँ, सम्बद्ध बैंक, जुन तपाईंलाई क्रेडिट प्रदान गर्दछ, संकेतकहरू र तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ। बैंकले क्रेडिट जोखिमलाई सधैं आकलन गर्दछ र पूर्वनिर्धारित संभावनाको आकलन गर्दछ।
क्रेडिट जोखिमसँग सम्बन्धित सर्तहरू
एकै ओर, धेरै सर्तहरू क्रेडिट र जोखिमसँग सम्बन्धित छन्। एकै ओर, प्रत्येक क्रेडिट बैंकमा एक जोखिम सिर्जना गर्दछ। यो तपाईंको लागि बुझ्न योग्य छ, किनभने तपाईं एक व्यक्ति यस ऋणको लागि आफ्नो आय र सम्पत्ति संग उत्तरदायी छन्, जुन तपाईंले अनुरोध गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अनुमोदन प्राप्त गर्नुहुनेछ। तथापि, बैंकहरू धेरै ग्राहकहरू छन् र बैंकिङ बनाउन बैंकसँग मुख्य व्यवसाय उधार व्यापार हो। यसकारण खतराहरू थपिन्छन् र तपाईंको विरुद्धमा एक जोखिमबाट, सबै ग्राहकहरूलाई उठाउँदछ जसले बैंकमा ऋण लिने एक खतरा जोखिम। नतिजाको रूपमा, बैंकहरूले आफ्नो व्यवसायिक योजनाहरूको माध्यमबाट जोखिमको एक धेरै उच्च क्षमता उत्पन्न गर्दैछ र तपाईले अतीतबाट पनि थाहा पाउनुहुनेछ कि प्रायः बैंकहरूले ऋण बन्द गरेका छन् जुन लगभग बैंकको पतनको कारणले बढेको छ। नतिजाको रूपमा, व्यक्तिगत क्रेडिटमा क्रेडिट जोखिम छ, तर बैंकलाई दिइने सबै ऋणहरूको बोजर्सले सम्पूर्ण जोखिम उत्पन्न गर्छ। यो खण्ड पनि फैलिएको खतरामा विभाजित छ, किनकि बैंक धेरै भिन्न जोखिमहरु संग विभिन्न ऋण पुरस्कार प्रदान गर्दछ। विशेष गरी निजी ऋण जोखिममा छन् र धेरै जोखिमको अधीनमा छन्। तथापि, तपाईलाई थाहा छ कि बैंकले यो क्रेडिट जोखिम विरुद्ध आफूलाई बीमा गर्न सक्छ। घटनामा तपाईंले आफ्नो ऋण फिर्ता नगर्नु भएको छ, बैंकले यो बीमालाई मात्र सजिलो बनाउँछ वा संपार्श्विक जम्मा गरेको मूल्याङ्कन गर्दछ। यसैले बैंकहरूले क्रेडिट प्रदायकको रूपमा हानिकारक रूपमा राम्रो तरिकाले छन्, र त्यसो भए यो जोखिम बैंकहरूको लागि विपत्ति हुन सक्छ। तपाइँ अब यो वास्तवमा थाहा छ यो खतरा हो।
अघिल्लो लेखक्रेडिट स्थानान्तरण
अर्को लेखभरोसा ऋण